ဆိုးသောသူတို့? | Apg29
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် ဒါဝိဒ်သည်Billström
ယရှေုသညျယုံကြည်သူများမဟုတ်သောလူများအထဲကရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျမွကွေီးပျေါမှာလမ်းလျှောက်သောအခါသူအထံတော်သို့လာသောလူအများတွင်ပေါ်မယ့်အရာကိုသိသည်။ သူဟာဒီနေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
" ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကသူ့ကိုအခွန်ခံများနှင့်ဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားသည်မြင်လျှင်, သူတို့ကသူသည်အခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားခြင်းနှင့်အချိုရည်ကြောင့်ဘယ်လိုတပညျ့တျောတို့သလော ယရှေုသညျထိုစကားကိုကြားလျှင်, သူကလညျး: အဆိုပါကျန်းမာဆေးသမားမလိုအပ်ပေမယ့်မနာဘူး။ ငါဖြောင့်မတ်ခေါ်ခြင်းငှါမလာကြပေမယ့်ဆိုးသောသူတို့နောင်တ။ "မာကု။ 2: 16-17
တခါတရံသညျယရှေုနီးပါးနောက်ကျောအပေါ်လူတိုင်း patted သူတို့နေထိုင်ခဲ့ဘယ်လိုလူတွေရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အတည်ပြုခဲ့သည်သူတစ်ဦး hippie အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယရှေုက "အပြစ်သားများ" ဟုခေါ်ပေမယ့်သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုရှိကြ၏ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအလွဲသုံးစားမှုတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ကမျြးစာစာဖတ်သူကိုအဖြစ်, သင်ကသူ့စာဖတ်လွန်းအမျိုးအစားဖြစ်ဖို့မသင်ယူဖို့ရှိသည်။ ကမျြးစာကိုမကြာခဏတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်ကြောင်းအများအပြားအရိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်မကြာခဏကျွန်တော်သိပ်အမှန်တရားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဒါခက်ခဲဖြစ်ကြပြီးအမှန်တရားကိုရွေးယူ။ ကျွန်တော်အစအဦး၌မဘတ်အဖြစ်ယေရှု, လူဆိုးတို့နှင့်အတူခဲ့ကြောင်း Tex ။ နောင်တ - ဒါဟာအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါအချို့သောယရှေုသညျပွုတျောမူသော, လူမျိုးအပေါင်းတို့တွင်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းအမှန်တရားအပေါ်ချဲ့ဖို့ရွေးချယ်ပါ။ ထိုအကအံ့သြဖွယ်သည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခံရသည့်အခါသညျယရှေုအာရုံကြောမရပေနှင့်စီးကရက်မြူမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိ - နောင်တသို့ခေါ်ခြင်း။ တစ်ခါတစ်ရံအခမဲ့ဘုရားကျောင်းနီးပါးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် frikyrkojesus created သာကော်ဖီ, buns နှင့်ကြားဝင်အသနားခံဆက်ကပ်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်တပြင်လုံးကိုအမှန်တရားကနေဝေး။ နောင်တတရား - သူဖြေရှင်းချက်ပြသထားတယ်။
ငါတို့သည်လည်းနောင်တတရားကိုပြသသည့်အတိုင်း, ထို့နောက်အရာနှစ်ခုကမျြးစာတည်းဟူသောဖြစ်ပျက်။ ပြည်သူ့လှည့်နှင့်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ရပေမယ့်လူတွေကစိတ်ဆိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လူတွေကိုစိတ်ဆိုးရဖြစ်ပျက်သည့်အခါမဟုတ်ရင်အဘို့, ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှားပြီဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဆွီဒင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကျိန်းသေအအေး-နှလုံး dompredikanter မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘဲကျနော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာကျောရိုးဖြစ်ကြောင်း။ ကရိုသေလေးစားမှုပေမယ့်မထီမဲ့မြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ယုံကြည်, တက်သည်ရပ်တည်ရန်ရဲဘူး။
" ထို့ကြောင့်သူ (ယရှေု) သင်သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်တာယာမများနှင့်စွန့်လွှတ်ကြောင်း, လူဆိုးတို့ထံမှထိုကဲ့သို့သောဝိရောဓိအတူတက်ထားခဲ့ရတယ်ကြသူကိုသတိရပါ။ " ဟေဗြဲ။ 12: 3
ဆနျ့ကငျြနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကျိန်းသေကျနော်တို့အဘို့ကွိုးစားသငျ့တစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့အဘို့ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ငါတို့သည်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါကျွန်တော်အကောင်းကုမ္ပဏီ၌နေသောသိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေကမ္ဘာ့ခြီးမှမျးခွငျးမြားနှငျ့ခြီးမှမျးမရှာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အဲဒီလိုဆိုရင်အဲဒါကိုကျနော်တို့အငူနှင့်ငန်ဆုံးရှုံးကြောင်းပြုပါရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ဧဝံဂေလိတရားကိုဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဒါပေမယ့်လည်းအပြစ်တရား၏အပွစျဒဏျ၌ဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးခွငျးကိုဖျောပွသညျယရှေုကိုအသေခံတော်မူ၏။ ကျေးဇူးတော်နှင့်အဘို့သန့်ရှင်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်နောင်တတရားလူတွေကိုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ထိုအလိုငှါနောင်တရမည့်အစားအပြစ်တရား၏လက်မှဘုရားသခငျသညျလှညျ့ဆိုလိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို stereotyped မရစို့နှင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်လျက်ရှိခြင်းမရှိဘဲ, အားလုံးအခြေအနေများတွင်တူညီသောစတိုင်ကို run ။ တခါတရံဒါပျော့နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တိုကျတှနျးနှင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေကိုထို့နောက်ကိုတုံ့ပြန်သူတို့ကိုအထိဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သိသာယရှေု၏မတ်ေတာရှိတဲ့လက်နက်သို့ဖြစ်နိုင်သောအလှည့်အတိုင်းလူအတော်များများချင်တယ်။
မှတ်ချက်: ငါ့ကိုထက်အခြားလူများကရေးသား Reader ကိုမေးလ်, ဆောင်းပါးများနှင့်မှတ်ချက်များ ( Christer Åberg, တည်ထောင်သူ Apg29 ), အစဉ်မပြတ်ငါဝေမျှမထင်မြင်ယူဆနိုင်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏ဆောင်းပါးများကိုယေဘုယျအားလက်မှတ်မထိုးဖြစ်ကြသည်။
Vecka 21, lördag 25 maj 2019 kl. 09:33